Kutakura kwepasi rese - MediaLight Bias Lighting
Kutakura kwepasi rese kwakadzikiswa zvakanyanya uye kunosanganisira ese emitero nemitero, VAT, nezvimwe. Pachave pasina kushamisika kusingafadzi pakununurwa. Izvi zvinozivikanwa muindasitiri yekutakura se "kuendesa basa rakabhadharwa" kana DDP pfupi.
Munyika zhinji, iwe uchaona unogamuchirwa pawebhusaiti yedu pamwe nekadiki pop-up iyo inoratidza inofungidzirwa mabasa uye VAT. Ndokumbira utarise kuti kunyangwe mumamiriro ezvinhu apo isu patinopa yakaderedzwa kana yemahara FedEx kutumira, iyo chaiyeiye Mari yekutumidzira ichiri kushandiswa nenyika yako kuverenga kwekupedzisira mabasa uye mutero unounganidzwa
FedEx Yepasirose Yekutanga: Inobhadhariswa pamitero yedu yakadzikiswa yemadhora anosvika kumadhora 59.99
FedEx Yepasirose Yekutanga: $ 9.95 yekuodha kubva pa $ 60 kusvika $ 110.00
FedEx Yepasirose Yekutanga: Mahara pamirairo inodarika $ 110.00
Isu tinotakura kune dzimwe nyika neFedEx Priority International (2-6 Mazuva) uye mitengo yedu yakanyanya kuderera. Mitengo yacho inoenderana nekwaunogara uye saizi uye huremu hwezvaunoraira.
Kana iwe ukashandisa mutakuri wekutakura zvinhu, ndapota nzwisisa kuti kana kamwe pasuru yakapihwa kune anotakura zvinhu, inoonekwa seyakaunzwa kunyangwe iye anotungamira akarasikirwa nechinhu. Iwo huwandu hwakawanda hwezvinetso zvepasirese zvekutakura zvine chekuita nevatakuri vekutakura zvinhu varasikirwa, kubata zvisirizvo uye kukuvadza kutumirwa. Zvinoitika kazhinji zvakakwana zvekuti isu tinoda kukuzivisa iwe nezve njodzi dziripo.
Kune zvakare zvimwe zvipingamupinyi zvewarandi zvinoshanda pakutakura zvinhu, zvichikanganisa mashandisiro atinoita zvikamu zvekutumirwa kwauri, uye izvo zvisingashande kana iwe ukashandisa yedu yepasirose yekutumira sarudzo. Verenga yedu warranty page mamwe mashoko.